Ruushka oo diiday in Suuriya la cunaqabateeyo - BBC News Somali
Ruushka oo diiday in Suuriya la cunaqabateeyo
Golaha amaanka ee Qaramada Midoobey ayaa mar kale isaga imaanaya xaaladda dalka Suuriya, ayadoo dalalka golahan ku jira ay isu awood sheeganayaan.
Xubnaha ka soo jeeda dalalka galbeedka waxay ku dhaaranayaan in maalmaha soo socda uu soo bixi doono qaraar cusub oo ka hadlaya hubka kiimikada ah ee dagaalka loo isticmaalay.
Maraykanka iyo Ruushkana hadallo adag ayey is dhaafsadeen.
Xubnaha golahan ayaa yeeshay shir wadatashi ah oo ay albaada u laaban yihiin, si ay isugu dayaan in ay ku heshiiyaan qodobada qaraarkan ee dowladda Suuriya ka mamnuucayo in laga iibiyo diyaaradaha qumaatiga u kaca ee Helikoptarka loo yaqaan isla markaana lagu saarayo cunaqabatayn jawaab u ah weerarro loo adeegsaday hubka kiimikada ah oo dalkaasi ka dhacay.
Xukuumadda Dimishiq ayaa beenisay in ay iyada ku lug lahayd weeraradaasi.
Balse ku xigeenka safiirka Ruushka u fadhiya Qaramada Midoobey Vladimir Safronkov oo shir jaraa'id qabtay ayaa waxa uu ballan qaaday in dalkiisa uu diidmada qayaxayan uu kala hor imaan doono qaraar kastaa oo noocaasi ah, waxa uuna qaraarkaasi ku tilmaamay daan-daansi.
Safiirka Mareykanka u fadhiya Qaramada Midoobey Niki Haley oo ka jawaabaysa hadalka Ruushka ayaa sheegtay in loo baahan yahay in tallaabo la qaado, waxa ayna Ruushku ku eedeysay in uu isku dayayo in uu mar-marsiiyo u raadiyo dowladda Suuriya.
Faransiiska ayaa ka shaqeynayay qaraarkan tan iyo markii baaritaan ay Qaramada Midoobey sameysay lagu ogaaday in dowladda Suuriya ay lahayd mas'uuliyadda ugu yaraan saddex weerar oo loo adeegsaday suntan kalooriinka.
Baaritaanka ayaa sidoo kale lagu ogaaday in mintidiinta koodxa dowladda islaamka ay mas'uul ka ahaayeen ugu yaraan hal weerar oo loo adeegsaday hubka kiimikada.
Shirka wada tashiga ee golahan ayaa ku soo beegmayo xilli wakiillo ka kala socda dowladda Suuriya iyo kooxaha mucaaradka ay wada hadallo uga socdaan magaalada Geneva.
Wada xaajoodkan ayaa waxaa garwadeen ka ah Qaramada Midoobey.
Safiirka Faransiiska u fadhiya Qaramada Midoobey ayaa sheegay in qaraarkan ay soo bandhigayaan uusan marnaba dhibaato ku noqon doonin wada hadaladaasi.